ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကာလအတွင်းကင်းလှည့်နေသော ရုရှားရဲများ။
ရုရှားနိုင်ငံဟာ ကြာသပတေးနေ့မှ ပြင်သစ်နဲ့ ဂျာမဏီနိုင်ငံတွေထက် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါပိုး အကူးစက်ခံရသူ အရေအတွက် ပိုများသွားတဲ့ အတွက် အခုဆို ကမ္ဘာမှာ ဒီရောဂါပိုးအကူးစက်ခံရသူ ပဥ္̔စမမြောက် အများဆုံးနိုင်ငံဖြစ်လာပါပြီ။
မော်စကိုမြို့တော်ဝန်ကလည်း အစိုးရစာရင်းဇယားထက် တကယ်တမ်း အကူးစက်ခံရသူ အရေအတွက်ဟာ သိပ်ကိုများနေကြောင်း ပြောပါတယ်။
အစိုးရထုတ်ပြန်တဲ့ စာရင်းမှာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၄ နာရီအတွင်း အကူးစက်ခံရသူ (၁၁ ၂၃၁) ဖြစ်လာတာကြောင့် အခုချိန်ထိ ဒီရောဂါ အကူးစက်ခံရသူ (၁၇၇ ၁၆၀) ဖြစ်သွားကြောင်း ဖေါ်ပြထားတာကြောင့် ဒါဟာ ဂျာမဏီ တို့ ပြင်သစ်တို့ထက် ပိုများနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီရောဂါဖြစ်ပွါးရာ ဗဟိုဌာနဟာ မော်စကိုမြို့တော်မှာ ဖြစ်ပြီး ညတွင်းချင်းမှာပဲ နောက်ထပ် အကူးစက်ခံရသူ (၆၇၀၃) ဖြစ်လာတာကြောင့် အခုဆို၉ သောင်းကျော် (၉ ၂ ၆၇၆) ရှိနေပြီလို့ အစိုးရက ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မော်စကိုမြို့တော်ဝန်ကတော့ အစိုးရထုတ်ပြန်တာထက် ၃ ဆ ကျော် ပိုများပြီး ၃ သိန်းလောက် ရှိနိုင်တယ်လို့ ခန့်မှန်းပါတယ်။
ဒါ့အပြင် အခုအချိန်ဟာ အားကစားရုံတွေ၊ စားသောက်ဆိုင်တွေနဲ့ ရုပ်ရှင်ရုံတွေ ပြန်ဖွင့်ဖို့ သိပ်စောနေသေးကြောင်းနဲ့. မြို့တော်မော်စကိုအတွက် နေအိမ်တွေမှာပဲ သီးခြားနေကြဖို့ ကန့်သတ်ချက်ကို မေလ ၃၁ ရက်နေ့ အထိ သက်တမ်း ဆက်တိုးမှာ ဖြစ်ကြောင်း လည်း မြို့တော်ဝန်က ပြောပါတယ်။
မော်စကိုမြို့တော်နဲ့ ရုရှားက တခြားဒေသတွေမှာ အသွားအလာ ကန့်သတ်ထားတာ သီတင်း ၆ ပတ်ရှိနေပါပြီ။
ရုရှားနိုငျငံဟာ ကွာသပတေးနမှေ့ ပွငျသဈနဲ့ ဂြာမဏီနိုငျငံတှထေကျ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈရောဂါပိုး အကူးစကျခံရသူ အရအေတှကျ ပိုမြားသှားတဲ့ အတှကျ အခုဆို ကမ်ဘာမှာ ဒီရောဂါပိုးအကူးစကျခံရသူ ပဥ်̔စမမွောကျ အမြားဆုံးနိုငျငံဖွဈလာပါပွီ။
မျောစကိုမွို့တျောဝနျကလညျး အစိုးရစာရငျးဇယားထကျ တကယျတမျး အကူးစကျခံရသူ အရအေတှကျဟာ သိပျကိုမြားနကွေောငျး ပွောပါတယျ။
အစိုးရထုတျပွနျတဲ့ စာရငျးမှာ လှနျခဲ့တဲ့ ၂၄ နာရီအတှငျး အကူးစကျခံရသူ (၁၁ ၂၃၁) ဖွဈလာတာကွောငျ့အခုခြိနျထိ ဒီရောဂါ အကူးစကျခံရသူ (၁၇၇ ၁၆၀) ဖွဈသှားကွောငျး ဖျေါပွထားတာကွောငျ့ ဒါဟာ ဂြာမဏီ တို့ ပွငျသဈတို့ထကျ ပိုမြားနတော ဖွဈပါတယျ။
ဒီရောဂါဖွဈပှါးရာ ဗဟိုဌာနဟာ မျောစကိုမွို့တျောမှာ ဖွဈပွီး ညတှငျးခငျြးမှာပဲ နောကျထပျ အကူးစကျခံရသူ (၆၇၀၃) ဖွဈလာတာကွောငျ့ အခုဆို ၉ သောငျးကြျော (၉ ၂ ၆၇၆) ရှိနပွေီလို့ အစိုးရက ထုတျပွနျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ မျောစကိုမွို့တျောဝနျကတော့ အစိုးရထုတျပွနျတာထကျ ၃ ဆ ကြျော ပိုမြားပွီး ၃ သိနျးလောကျ ရှိနိုငျတယျလို့ ခနျ့မှနျးပါတယျ။
ဒါ့အပွငျ အခုအခြိနျဟာ အားကစားရုံတှေ၊ စားသောကျဆိုငျတှနေဲ့ ရုပျရှငျရုံတှေ ပွနျဖှငျ့ဖို့ သိပျစောနသေေးကွောငျးနဲ့. မွို့တျောမျောစကိုအတှကျ နအေိမျတှမှောပဲ သီးခွားနကွေဖို့ ကနျ့သတျခကျြကို မလေ ၃၁ ရကျနေ့ အထိ သကျတမျး ဆကျတိုးမှာ ဖွဈကွောငျး လညျး မွို့တျောဝနျက ပွောပါတယျ။
မျောစကိုမွို့တျောနဲ့ ရုရှားက တခွားဒသေတှမှော အသှားအလာ ကနျ့သတျထားတာ သီတငျး ၆ ပတျရှိနပေါပွီ။